ရနေး ဒေးကာ့ - The Reader Wiki, Reader View of Wikipedia
ဖရန် ဟော (Frans Hals)ဟန် ပုံတူ၊ ၁၆၄၈ 
(1596-03-31)မတ် ၃၁၊ ၁၅၉၆
လဟေးယွန်တုရိန် (La Haye en Touraine)၊ ပြင်သစ်ဘုရင့်နိုင်ငံတော်
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၁၆၅၀(1650-02-11) (အသက် ၅၃)
စတော့ဟုမ်း (Stockholm)၊ ဆွီဒင်အင်ပိုင်ယာ
၁၇ ရာစု ဒဿနိကဗေဒ
ကာတေးရှန်းဝါဒ (Cartesianism) (စတင်ထူထောင်သူ)၊ ရာရှင်နယ်ဝါဒ (rationalism)၊ ပန္နက်ခိုင်ဝါဒ (foundationalism)
နာမ်ဝါဒ (metaphysics)၊ အက်ပီစတမ်မိုလော်ဂျီ (epistemology)၊ သင်္ချာ
Cogito ergo sum [မှတ်စု ၁]၊ စနစ်တကျ သံသယ (methodic doubt)၊ ထောင့်မှန်ကျလိုင်းများ ရှာနည်း (method of normals)၊ ကာတေးရှန်း ကိုဩဒိနိတ်စနစ် (Cartesian coordinate system)၊ ကာတေးရှန်း ရုပ်နာမ်နှစ်ဖြာဝါဒ (Cartesian dualism)၊ ဘုရား (God) ရှိကြောင်း ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာ အဆို (ontological argument)၊ mathesis universalis [မှတ်စု ၂]၊ ဒေးကာ့၏ ပန်းထုံး (folium of Descartes)
ပလေတို၊ အရစ္စတိုတယ်, အယ်ဟာဇမ် (Alhazen)၊ အယ်ဂါဇာလီ (Al-Ghazali)၊  အာဗဲရို့ (Averroes), အာဘီစန်းနား (Avicenna)၊ အန်ဆမ်း (Anselm)၊ ဩဂတ်စတင်း (Augustine)၊ အကွိုင်းနပ် (Aquinas)၊ အော့ကမ် (Ockham), ဆွာရေ (Suarez)၊ မာဆန် (Mersenne)၊ ဆက်တပ် အမ်ပီရစ်ကတ် (Sextus Empiricus)၊ မွန်တေနျူ (Montaigne)၊ ဂိုးလီယပ် (Golius)၊ ဘေ့ခမန် (Beeckman)၊ ဒန်း စကိုးတပ် (Duns Scotus) 
ဆပင်နိုဇာ (Spinoza)၊ လိုက်ဘနစ် (Leibniz)၊ ဂျွန် လော့ခ် (John)၊ မဲဘရန့် (Malebranche)၊ ဘလေ့ဇ် ပါစကဲ (Blaise Pascal)၊ အက်ဒမန် ဟက်စရယ် (Edmund Husserl)၊ နုမ်း ချွမ်စကီ (Noam Chomsky)၊ အိုက်ဇက် နယူတန် (Issac Newton)၊ စလဗော့ ရေရက် (Slavoj Žižek)၊ ယိုဟန် ဂေါ့လိ ဖစ်ရှတ (Johann Gottlieb Fichte)
ရနေး ဒေးကာ့ (အင်္ဂလိပ်: René Descartes /ˈdeɪˌkɑːrt/၊ ပြင်သစ်: [ʁəne dekaʁt]၊ (1596-03-31)မတ် ၃၁၊ ၁၅၉၆ - ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၁၆၅၀(1650-02-11)) သည် ပြင်သစ်လူမျိုး အတွေးအခေါ် နှင့် သင်္ချာပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။
↑ ဒေးကာ့၏ ဤအဆိုကို မြန်မာလို "ငါတွေး၍ ငါရှိသည်" ("I think, therefore I am") ဟု အကြမ်းဖျဉ်း ဘာသာပြန်နိုင်သော်လည်း မူရင်းသုံး လက်တင်ဘာသာဖြင့် ညွှန်းဆိုခြင်းမှာ ပိုမိုတွင်ကျယ်၍ ဤအဆို၏ အမည်ကို လက်တင်ဘာသာဖြင့်သာ ထားရှိခြင်းက ပိုမိုသင့်လျော်နိုင်သည်။ (ဤအဆိုကို ဒေးကာ့က ပြင်သစ်နှင့် လက်တင်နှစ်ဘာသာသုံး၍ ရေးခဲ့သည်။)
↑ မြန်မာလို "ပြီးပြည့်စုံသည့် အသိပညာဘာသာစကား" ဟု အကြမ်းဖျဉ်း ဘာသာပြန်နိုင်သော်လည်း ဤ mathesis universalis ဆိုသည်မှာ ဂရိနှင့် လက်တင်ပေါင်းစပ်ထားသည့် (လူအမည်၊ နေရာအမည်ကဲ့သို့) ပုဂ္ဂလနာမ်နီးပါးဖြစ်ရာ မူရင်းအတိုင်း ထားရှိခြင်းက မိုပိုသင့်လျော်နိုင်သည်။
↑ Russell Shorto (2008)။ Descartes' Bones။ Doubleday။ see also The Louvre, Atlas Database
↑ Marenbon, John (2007). Medieval Philosophy: an historical and philosophical introduction. Routledge, 174. ISBN 978-0-415-28113-3။
This page is based on the Wikipedia article ရနေး ဒေးကာ့; it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC-BY-SA). You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA.